နေပြည်တော်သို့ ခြေလျင်ချီတက် ဆန္ဒပြ ရွှေလုပ်သားများ တားဆီးခံရ
Home ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စီးပွားရေးသတင်း ဆောင်းပါး မြန်မာနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ သတင်းပြည်တွင်းသတင်း ဒေသန္တရသတင်း ပြည်သူ့အသံ ကမ္ဘာ့သတင်း ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း ရသသတင်း နာရေးသတင်း အားကစားသတင်း အမှားပြင်ဆင်ချက် အင်တာဗျူး အထူးကဏ္ဍပြည်သူ့စစ်သား သုတေသနနာဂစ် ၁ နှစ်ပြည့် အမေရိကန် ပေါ်လစီနှင့် မြန်မာရေးရာ ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ၈ လေးလုံး အထူး အာဇာနည်နေ့အထူး အမေဒေါ်အမာ အထူး ဆန္ဒခံယူပွဲအထူး ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၀ မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲ သတင်းဖြစ်စဉ်များ ရွေးကောက်ပွဲတွင်း တင်ဆက်မှု ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုသူများ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်သူများ ပါတီအကြောင်း သိကောင်းစရာ ရွေးကောက်ပွဲ အထူး လွတ်မြောက်မှုသို့ သိုမှီးရာရန်ကုန်နှင့်မုန်တိုင်း မြန်မာပြည်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကြေးနန်းများ အိုဘားမား မြန်မာ ခရီးစဉ် အာဘော်နှင့်အမြင်ဆောင်းပါး အယ်ဒီတာ့ထံပေးစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော် သဘောထားအမြင် ညွှန်းဆိုရာ ရသဘဏ်တိုက်ကဗျာ ပြဇာတ် စာအုပ်စင် ရုပ်ရှင် ခရီးသွားဆောင်းပါး မားလ်တီမီဒီယာဗီဒီယို Photo EssayPhoto Essay. ဓါတ်ပုံ ကာတွန်း ဂျာနယ် မဇ္ဈိမ ရေဒီယို မဇ္ဈိမတီဗီRFA & Mizzima TV Voter Voices Mizzima TV Weekly: Business News ကြေညာချက် Home > သတင်း > ပြည်တွင်းသတင်း > နေပြည်တော်သို့ ခြေလျင်ချီတက် ဆန္ဒပြ ရွှေလုပ်သားများ တားဆီးခံရ
နေပြည်တော်သို့ ခြေလျင်ချီတက် ဆန္ဒပြ ရွှေလုပ်သားများ တားဆီးခံရ	ဟင်္သာနီ (မွန်မြေ)	| အင်္ဂါနေ့၊ ဇွန်လ ၁၂ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၁၇ နာရီ ၀၃ မိနစ်	စံခလပူရီ (မဇ္ဈိမ) ။ ။ တပိုင်တနိုင် ရွှေတူးဖော်ခွင့် ပြည်လည် ရရှိရေးအတွက် ဆန္ဒပြသည့်အနေဖြင့် နေပြည်တော် သို့ ခြေလျင်ချီတက်နေကြသည့် ရမည်းသင်းမြို့ မိုးထိမိုးမိ ရွှေမှော်မှ အလုပ်သမား ၃,၀၀၀ ကျော်ခန့် ရွှေမြင်တောင် ဘုရားသို့ အရောက်တွင် လုံထိန်းနှင့် ရဲအင်အား ၆၀၀ ခန့်က ဝိုင်းရံလမ်းပိတ်ထားကြောင်း သပိတ်ခေါင်းဆောင် တဦးဖြစ်သူ ကိုသက်လွယ် က ပြောသည်။“ကျနော်တို့ ရှေ့တည့်တည့်မှာပဲ လမ်းပိတ်ပြီး ရပ်နေကြတာပါ။ လက်နက် အပြည့်အစုံနဲ့ ဒိုင်းတွေ၊ ဝါးရင်းတုတ်တွေ ကိုင်ပြီး လမ်းပိတ် နေပါတယ်။ တာဝန် ရှိသူတွေက ကျနော်တို့နဲ့ လာရောက် ညှိနှိုင်းတာ မရှိသေးပါဘူး။ ကျနော်တို့ ဘက်ကလည်း စောင့်ကြည့်နေပါတယ်” ဟု မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။အဆိုပါ အလုပ်သမားများသည် မိုးထိမိုးမိ ရွှေလုပ်ကွက်မှ မိုင် ၁၀၀ ခန့် ကွာဝေးသည့် နေပြည်တော်သို့ ချီတက်ကြမည်ဖြစ်ကာ ရမည်းသင်းမှ မိုင်လေးဆယ်ခန့် အကွာ ရွှေမြင် တောင်ခြေသို့ (ခရီး သုံးပုံ တပုံ) အရောက်၌ အာဏာပိုင်များမှ ယခုကဲ့သို့ တားမြစ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဆန္ဒပြ အလုပ်သမားများသည် မိုးထိမိုးမိ တောင်မှ တနင်္လာနေ့ နံနက်က စတင် ထွက်ခွာခဲ့ကြပြီး ရွှေမြင်တောင်သို့ ထိုနေ့ည ၈ နာရီခန့်တွင် ရောက်ရှိခြင်းဖြစ်သည်။ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့မှ စတင်၍ မိုးထိမိုးမိ တောင်ပေါ်ရှိ ရွှေလုပ်သား တသိန်းခန့် ဆန္ဒပြခဲ့ပြီး ထိုအထဲမှ အလုပ်သမား ၃,၀၀၀ ခန့်တို့က နေပြည်တော်သို့ ခြေလျင် ချီတက် ဆန္ဒပြကြခြင်း ဖြစ်သည်။“သူတို့ခွင့်ပြုတဲ့ အက်ဒစ်တွင်း ဆိုတာက ကျနော်တို့ တနိုင်တပိုင် လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေနိုင် ပါဘူး။ သိန်းပေါင်း ရာချီ ရင်းရတာ။ ကျနော်တို့က ဘယ်တတ်နိုင်မှာလဲ။ ကျနော်တို့ရဲ့ လုပ်အား၊ ကျနော်တို့ရဲ့ ရှိမဲ့စုမဲ့ အရင်းအနှီးနဲ့ စိုက်ထုတ် ထားတာတွေကို ပြန်လည် လုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိဖို့ အခုလို နေပြည်တော်ကို ခြေလျင် ချီတက်ပြီး ဆန္ဒပြ ဖော်ထုတ်ရခြင်း ဖြစ်တယ်။ အရင်က သဘောတူထားကြသလိုပဲ ပြန်ပြီး လုပ်ပိုင်ခွင့် ပေးစေချင်တယ်” ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲတွင် ပါဝင်သည့် ရွှေလုပ်သား တဦးက ပြောသည်။လုပ်သားများအနေနှင့် သမ္မတနှင့် အစိုးရရှိရာ နေပြည်တော်အရောက် ချီတက်၍ ၎င်းတို့ လိုလားချက်များကို ထုတ်ဖော်ဆန္ဒပြကြမည်ဟု သိရသည်။၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ မေလတွင် ဒေသခံ ရွှေအလုပ်သမားများ၏ တနိုင်တပိုင် လုပ်ကွက်များ ဖြစ်သည့် ၄ ပေ ပတ်လည် ကျင်းများအား လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ပိတ်ပင်ခဲ့ပြီး အက်ဒစ်ဟုခေါ်သည့် အလျား ၇ ပေ၊ အနံ ၇ ပေ ရှိ အဆင့်မီ ရွှေတွင်း လုပ်ကွက်များကိုသာ ဆက်လက် ခွင့်ပြုမည်ဟု အမျိုးသား ကြီးပွားတိုးတက်ရေး ကုမ္ပဏီမှ ပြောဆိုခဲ့သည်။ထိုကုမ္ပဏီ စီမံကိန်း မန်နေဂျာ ဦးထွန်းအောင်မိုးက ၄ ပေ တွင်းများ အလွယ်တကူ ခွင့်ပြုပေးပါက သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်အား ထိခိုက်စေမည့်အပြင် လုံခြုံရေးအရ ခွင့်မပြုနိုင်လောက်အောင် အန္တရာယ်များသည့်အတွက်ဖြစ်ကြောင်း မီဒီယာများသို့ ပြောကြားထားသည်။အမျိုးသား ကြီးပွားတိုးတက်ရေး ကုမ္ပဏီသည် ကန္တာရစိမ်း၊ အာရှအမြုတေ၊ ရွှေပြည်အေး၊ ကြယ်ငါးပွင့်၊ ရွှေတောင်ကျော၊ ဝေလင်းထိုက်၊ မြမျိုးသက်ဦး၊ ရွှေညီအကို၊ ရေတော်သား၊ ရွှေပလောင်၊ ဓနစမ်းရေ၊ နေခြည်ပွင့်၊ ရဲညီနောင်၊ မိုးရွှေဝါ၊ မြင့်မိုရ်ရွှေတောင် ကုမ္ပဏီ စသည့် ကုမ္ပဏီပေါင်း ၂၉ ခု စုပေါင်းထားသည့် အုပ်စုကုမ္ပဏီ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်္ဘာလ ၉ ရက်နေ့တွင် ရမည်းသင်း ရွှေတော ကွက်ရပ် မိုးထိမိုးမိဒေသ၌ ရွှေသတ္တု တူးဖော်ခွင့်အား တရားဝင် လုပ်ကိုင်ခွင့် ရခဲ့သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ၌ ကုမ္ပဏီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုးထွန်းရှိန်က ထိုလုပ်ငန်းခွင်တွင်းရှိ အင်းပိုင် (ခ) စက်ပိုင်နှင့် အင်းသားများ စုစုပေါင်း ၅ သိန်းခန့်အား အမျိုးသား ကြီးပွားတိုးတက်ရေး ကုမ္ပဏီနှင့် ၅ နှစ် တရားဝင် လုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးမည်ဟု နှုတ်ကတိဖြင့် ပြောကြားခဲ့သည်။မိုးထိ - မိုးမိ ဒေသသည် အကျယ်အဝန်းအားဖြင့် ၆,၁၀၅ ဧက ရှိကာ ပင်လယ် ရေပြင်အထက် အမြင့်ပေ ၄,၆၀၀ ကျော် တွင် တည်ရှိသည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်ခန့်မှ စတင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ အရပ်ရပ်မှ ရွှေ့ပြောင်း ရွှေရှာသူများ ရောက်ရှိလုပ်ကိုင် အခြေချခဲ့ကြသည်။
အစိုးရ မတောင်းပန်မချင်း မန္တလေးသံဃာများ နေ့စဉ် ဆန္ဒပြမည်	မိုးထိမိုးမိ ခေါင်းဆောင်များ ရရှိ အာမခံ မယူဘဲ အမှုရင်ဆိုင်နေ	ဒဏ်ရာရ သံဃာများအတွက် တာမွေတွင် လူလေးဦး ဆန္ဒပြ	ဆန္ဒပြသူများကို မဖမ်းဆီးရန် ၈၈ က တောင်းဆို	လက်ပံတောင်း သပိတ်ဖြိုခွင်းမှု KIO ရှုတ်ချ	လက်ပံတောင်း အကြမ်းဖက်မှုတရားခံ ၅ ရက်အတွင်း ဖော်ထုတ်ပေးရန် မန်း သံဃာများ ဆန္ဒပြ	ယခင်အစိုးရနှင့် စီမံကိန်းအား ကာကွယ်၍ သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်	Who is Online
We have 168 guests online	www.bysjl.com	© Copyright 1998 - 2012 Mizzima News. All Rights Reserved